Jera ayaa si guul ah ka qeyb galay ee PT / EXPO Shiinaha 2017 ee Beijing, Shiinaha.
Jera ayaa si guul ah ttended at PT / EXPO Shiinaha 2017 ka dhacay 27-30 th of September 2017 ee Beijing, Shiinaha.
aad oo dhan ku mahadsan tahay booqashada our waab
Jera ayaa si guul ah ttended at PT / EXPO Shiinaha 2017 ka dhacay 27-30 th of September 2017 ee Beijing, Shiinaha. Aad oo dhan ku mahadsan tahay booqashada our waab
Location of xarunta bandhiga: Xarunta Qaranka ee heshiiska ee Beijing. Booth: Hall E5, waab 5618. Website of Exhibition.
Mawduuca ku Bandhiga ahaa yaqaan in waxyaabaha our macmalay oo aannu ku soo bandhiga
FTTH Fiber optic cable accessories, dhismaha shabakad isgaarsiinta iyo internet.
na noocan oo kale ah:
xiritaanka splice optic Fiber (FOSC)
sanduuqyada joojinta optic Fiber (FODB)
FTTH clamps silig dhibic oo rakiban
Preformed waxyaabaha line iyo accessories,
band bir ulaha iyo accessories.
Waxaan ku farxeen in macaamiisha cusub ka: China, South Asia, South America iyo Europe. mahad badan ee soo socda. Rajeynayaa inaan dhisi karo xiriir waqti dheer iyadoo la siinayo tayada kalsooni si ay u wada-hawlgalayaasha our.
Haddii aad qabto wax su'aalo ah doonto - ha ka waaban inaad nala soo xiriir.